Liiska Barnaamijka Moobilka iyo Moobillada Websaydhka Ganacsigaaga
Wali guud ahaan waan layaabay tirada boggaga aan wali lagu arki karin aaladda mobilada - oo ay kujiraan daabacaad aad iyo aad u weyn. Cilmi-baarista Google waxay muujisay in 50% dadku ay ka tagayaan degel haddii uusan ahayn mid moobiil ku habboon. Kaliya maahan fursad lagu helo qaar ka mid ah akhristayaasha dheeraadka ah, u habeynta bartaada adeegsiga mobilada waxay sare u qaadi kartaa khibradaada isticmaale tan iyo intii adiga ogaan in dadka waaweyni dhaqaaqaan! Iyada oo leh shaashado aad u tiro badan iyo nidaamyada hawlgalka, ku habboonaynta moobiilku maahan gabal keega mar dambe, in kastoo.
Waa kuwan Qalabka si aad uga dhigto boggaaga mid Diyaar u ah.
Aqoonsi - Appifier wuxuu dhisaa barnaamijyada macruufka ah ee IOS, Android, iyo Windows muddo ka yar 60 ilbidhiqsi.
Machadka - App dhise milkiilayaasha ganacsiyada yar yar mashquul.
apery.io - Barxadda keliya ee daruur ku saleysan oo leh aalado horumarineed oo muuqaal ah, iyo adeegyo isku-dhafan oo isku-dhafan
AppsGeyser - AppsGeyser waa adeeg BILAASH ah oo waxyaabahaaga ka dhiga u beddelaya App isla markaana lacag kaa dhigaya.
Appy Pie - daruur ku saleysan DIY Mobile App Builder ama Barnaamijka Abuurista App kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala ee aan lahayn xirfadaha barnaamijyada, inay u abuuraan barnaamij loogu talagalay barnaamijyada Windows 8 Phone, Android & iPhone ee mobilada iyo taleefannada gacanta; kuna daabac Google Play & iTunes.
bAbaabul - qalab fudud, aasaasi ah oo si otomaatig ah ugu beddelaya waxyaabahaaga barta mobilada la hagaajinayo oo leh qaabayn aasaasi ah.
Barnaamijyada Caajiska - Habka ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee ganacsi kasta loogu abuuri karo barnaamijka iPhone-ka kaliya $ 39 bishii!
Dhismaha dabka - Aaladda Dhismaha Awoodda leh ee Qalabka leh 'Whitelabeling'.
Codiga waa dhise jiido-iyo-dhibic awood leh oo abuuraya barnaamijyo moobiillada iskutallaabta ah iyo websaydhyada.
Como - Abuur barnaamij kuu gaar ah oo mobilo ah meherad kasta.
DudaMobile - dhammaan qalabka aan tijaabiyey, tani waxay noqon kartaa midda ugu fudud ee la isticmaali karo lana hirgelin karo! Sixiroolaha aasaasiga ah ayaa kuu oggolaan kara inaad yeelato goob mobal ah daqiiqado gudahood. Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad ka saarto dhammaan xayeysiisyadooda oo aad u isticmaasho domain gaar ah xoogaa lacag ah oo dheeri ah.
FiddleFly - Dhisme Websaydh dhaqameed fudud ah oo loogu talagalay wakaaladaha si ay ula shaqeeyaan macaamiishooda dhismaha goobaha mobilada.
Mobicanvas - bilaash ah, jiido oo hoos u dhig CMS-ga moobaylka leh is-dhexgalka widget iyo warbixinta aasaasiga ah.
Dhaqaaji - Daabacayaasha iyo naqshadeeyayaasha websaydhka adduunka oo dhan waxay adeegsadaan Mobify Studio si ay u abuuraan degello internet oo qurux badan leh. Mobify waxay daabacday boggaga mobilada tiro nidaamyo maareyn ah, oo ay ku jiraan WordPress, Drupal iyo kuwa kale. Mobify sidoo kale wuxuu leeyahay mashiin ecommerce.
Wadada Wareegta - waxay dhistay boqolaal codsiyo khaas ah oo loogu talagalay kooxaha, dadka caanka ah ee isboortiga iyo ganacsiyada. Nidaamkooda maareynta maadooyinka ayaa ah mid aad u isku dhafan oo casri ah.
Mobdis - Dhise degelka mobilada. Hadda waxaad ku ballaadhin kartaa suuq-geynta moobiilka iyada oo aaladdeenna kuu oggolaanaysa inaad si fudud ugu abuuri karto bogag moobiillo fiican leh.
mobiSiteGalore - Samee daqiiqado kuu gaar ah Website-ka Mobile-ka oo umuuqda mid hodan ku ah taleefannada casriga ah ee xurmada leh xitaa taleefannada hoose
Moofis - waa nidaam maareynta maaddooyinka moobiilka oo waliba dhexgeli kara aaladda dukaan juqraafiyeed. Dhis, bilow, Cabir, Isku dar oo kobci shabakadaada moobaylka.
Moovweb - Adoo adeegsanaya aaladaha horumarineed ee bilaashka ah iyo waxoogaa lambar Tritium-ka ah dhamaadka-websaydhka, degel kasta oo jira ayaa loo beddeli karaa, waqtiga dhabta ah, khibrad moobiil oo weyn. Habkani waxaa loo yaqaan 'Delivery Responsive', oo ah analogga shirkadeed ee naqshadeynta websaydhka jawaabta leh.
Taageerayaashayda Mobilada - Barnaamijyada moobiilka ee la awoodi karo iyo websaydhyada moobiilka ee shakhsiyadeed, aan faa'iido doon ahayn iyo jawiga ganacsiga yaryar iyada oo loo marayo warshadeena hogaamineysa barnaamijka DIY.
NetObjects Muuse waa codsi khadka tooska ah loogu talagalay naqshadeynta websaydhka moobiilka oo adeegsanaya tilmaamo garaaf ah si ay u siiso khibrad adeegsi dareen leh fudeyd aan la qiyaasi karin oo adeegsi ah. Mosaic waxaa loo farsameeyay inuu ahaado mid qurux badan oo fudud, hadana aan awood lahayn, si uu kaaga caawiyo inaad ku dhisto degello internet wax ku ool ah oo daqiiqado ah.
Bogga Qeybta waa urur howl wadeen ka ah oo diirada saaraya xoojinta ganacsiyada aad u yar (VSB's) oo leh aaladaha mobilada iyo bulshada si ay u koraan una guuleystaan.
Snappii wuxuu si dhakhso leh u dhisaa iPad-ka, iPhone-ka iyo barnaamijyada moobiilka gaarka loo leeyahay ee moobiilka kuwaas oo warshado gaar ah u baahan oo aan u baahnayn horumar.
Qalabka'AppBuilder ' - Kusoo cusbooneysii meheraddaada barnaamijyo. Abuur shirkado iyo barnaamijyo heer fasal dawladeed ah oo ka farxiya shaqaalaha, la-hawlgalayaasha iyo macaamiisha.
ViziApps - Naqshadeyso barnaamijkaaga hooyo oo aad maamusho xogtaada Adigoon sumadaynin, ka dibna si dhakhso leh ugu socod qalabkaaga.
Tags: appdhismaha appcodeeyemacallimiinappsgeysermacaanbarnaamijyada biznessgubashocodiqasidaapp mobiledhise barnaamijka mobiladamashiinka moobaylkasameeyaha barnaamijka mobiladamobile-ka saaxiibtinimohagaajinta mobiladagoobaha mobiladamoovwebtaageerayaashayda moobiilkasnappiidhise
Sep 10, 2011 at 2: 05 PM
'Lafaha qaawan' laakiin SAHAL IN LA ISTICMAALO, waxaan jeclahay WinkSite oo aan ugu isticmaalo boggeyga bilowga aaladaha mobilada.
Goobta wehelkeeda http://Delivr.com waxay ku fiican tahay abuurista lambarrada QR & falanqeyntooda.
Sep 10, 2011 at 3: 05 PM
Winksite wuxuu umuuqday inuu kahadal badanyahay mobilada aalad ka caawineysa badalida ama iskuxirka bartaada isticmaalka mobilada… miyaan ku khaldanahay?
Sep 11, 2011 at 12: 33 AM
Maya, WinkSite wuxuu abuuraa degel kuu sahlaya inaad dhex mushaaxdo (horeyba) waxyaabaha moobiilku ku habboon yahay (iyo sidoo kale quudinta RSS)
Sep 12, 2011 at 9: 57 PM
Waxyaabaha qabow. Qalab weyn Doug.
Tani waa markii labaad ee aan arko FiddleFly oo lagu xusay usbuucii la soo dhaafay ama sidaas. Waxaan isku dayay xoogaa ka mid ah qalabkan (Xitaa ma ogeyn inay jiraan tiro aad u badan) oo kaliya inaan la wadaago adiga iyo akhristayaashaada, FiddleFly ROCKS !! Waxaan ku dhisi karaa goobo loogu talagalay daqiiqado gudahood. Waayahay, markaa kahor intaanan bilaabin inaan u ekaado sidaan ugu shaqeeyo raggaan (Waa laga yaabaa inay soo daahdo) Waxaan u soo jeedinayaa akhristayaashaada inay isku dayaan xalal badan ka hor intaadan qaadan go'aanka ugu dambeeya.
Mar labaad waad ku mahadsan tahay qoraalka weyn
Sep 12, 2011 at 9: 58 PM
Sep 13, 2011 at 3: 35 AM
ka waran http://mobdis.com? html5 boggaga moobiilka iyo xayeysiiyaha dhise.
Sep 7, 2013 at 10: 44 AM
Lagu daray, ka raali noqo dib u dhaca!
Sep 13, 2011 at 8: 30 AM
Runtii waxaan isticmaalay dhowr qalab oo xitaa waxaan ku guuleystey inaan wax yar hagaajiyo sumcadda internetka howsha. Runtii maahan wax sahlan laakiin waa wax laqaban karo waana intaas oo muhiim.
Sep 2, 2014 at 4: 35 PM
Miyaad tixgelin lahayd moovweb inay tahay ikhtiyaar ku habboon liiskaaga, fadlan ku dar haddii aad sameyso.